(၄)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် မန်ဘာတို့ရဲ့စကားသံများ
Thread: (၄)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် မန်ဘာတို့ရဲ့စကားသံများ
03-28-2012 03:05 PM #1
Thanked 1,659 Times in 404 Posts
အရင်နှစ်မှာ လုပ်ခဲ့သလိုပဲ MEF ရဲ့ (၄)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်စာစောင်မှာလည်း မန်ဘာတွေရဲ့စကားသံလေးတွေကို ပြန်လည်ကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်... မန်ဘာအများစုကနေ ကိုယ့်ခံယူချက် ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကို တိုတိုရှင်းရှင်းနဲ့ ဖော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက် နှစ်ပတ်လည်စာစောင်မှာ ထည့်သွင်းသင့်တဲ့ ကဏ္ဍလေးပဲဖြစ်ပါတယ်....
မးခွန်းလေးတွေကို အခုခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖြေကြားရင်း ရေးသားသွားကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ....
ဖြေကြားသူအရမ်းများပါက အကောင်းဆုံး ဖြေကြားသူများကို အယ်ဒီတာအဖွဲ့က တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
အပြုသဘောဆောင်စွာဖြင့် ဖြေကြားဆွေးနွေးသွားနိုင်ကြပါစေဗျာ .......
(၁) အင်ဂျင်နီယာဆိုတာအပေါ် သင့်ရဲ့အမြင် ?
(၂) MEF မှာရှိနေအောင် ဘာက သင့်ကိုဆွဲဆောင်ထားတာလဲ / သင်ဘာကြောင့် MEF မှာ ရှိနေဖြစ်တာလဲ ?
(၃) သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ရပ်တည်မှုအပေါ် သင့်ရဲ့အမြင် ?
(၄) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေနဲ့တိုင်းတာနိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ… ?
(၅) မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအပေါ် သင့်ရဲ့ အမြင် ?
အဖြေလေးတွေကို စိတ်ထဲရှိသလိုရေးပြီး ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါခင်ဗျား... ဖိုရမ်နှစ်ပတ်လည်အမှတ်တရ စာစောင်လေးကို ဖိုရမ်မန်ဘာတွေရဲ့ စကားသံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ကြပါစို့ဗျာ...
The Following 25 Users Say Thank You to William Paul For This Useful Post:
AndrewSway, civilkoko, Dragon Warrior, dudugyi, Hla Min Maung, htinlin, johnmoeeain, kay lay, loyasay, luhein25, manawphyulay, NayNyo, nyeinmoewai, phoelapyae, pigkalay, skhaung, tinminhtoo, tunaungkyaw, wlk3649, zinmaung, ကိုထွန်း, ချင်းတွင်းသား, လိပ်ကြီး, နေမင်းသွေး, အေး
03-28-2012 05:43 PM #2
အင်ဂျင်နီယာဆိုတာ လူတွေထဲက လူတစ်ယောက်ပါပဲ။ တခြားလူတွေနဲ့မတူတာက ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ အလိုက် လိုက်နာရမဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေ ကို လိုက်နာပြီးတော့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရမှာပေါ့။ ဒီထဲကမှာ လိုက်နာရမဲ့ကျင့်ဝတ်ကို မလိုက်နာပဲ ဖြစ်သလိုနေခဲ့ရင်တော့ အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်တဲ့ သာမာန်လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်နေမှာပါ။
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာတွေကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာကနေ တတ်နိုင်သမျှကူညီခွင့်ရချင်သလို၊ ကိုယ်မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သူများမေးတဲ့အခါ အဖြေတွေဖတ်ရင်းကနေ ဗဟုသုတ ရနေလို့ပါ။
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ တော်ကြပါတယ်။ Knowledge sharing လုပ်လိုတဲ့ဆန္ဒတော့နည်းတယ် သို့မဟုတ် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး လိုတဲ့ဆန္ဒနည်းနေသေးတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ကျနော် တခြားနိုင်ငံခြားဖိုရမ်တွေ တော်တော်များများကို ၀င်ရောက်လေ့လာဖူးပါတယ်။ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား တော်တော်များများပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဟိုတလောလေးမှာပဲ အိန္ဒိယ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်တစ်ခုမှာ အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ ရက်သတ္တ (၂)ပတ်ကြာတဲ့ ကွန်ဖရင့်တစ်ခုလုပ်သွားပါတယ်။ အကုန်လုံးကို ဖိုရမ်ကနေပဲ လုပ်သွားတာပါ။ အဲဒီ (၂) ပတ်အတွင်းမှာ PhD ရထားတဲ့ ကျောင်းက ဆရာတွေ (၅)ယောက်လောက်က ကြီးကြပ်ပြီးတော့ လုပ်သွားပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်တွေက ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပညာအဆင့်အတန်းခွဲခြားပြီးတော့မထားပဲနဲ့ မေးထားသမျှမေးခွန်းတွေကို အကုန် ဒိုင်းခံဖြေပေးကြပါတယ်။ နောက်ထပ် အနာဂါတ်အတွက် ကုန်ကြမ်းရှားပါးလာတဲ့ပြဿနာတွေ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာအထိ ဆွေးနွေးထားတာ အားကျစရာပါ။ ကျတော်တို့ဖိုရမ်မှာတော့ အသက်ကြီးပိုင်းဆိုလို့ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ သူတွေနည်းနေတာ ကိုသွားတွေ့မိပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုတာကြီးနဲ့ မရင်းနှီးသလို၊ အင်တာနက်သုံးဖို့အတွက် တကူးတက အချိန်ပေးနေရတာတွေဟာဒီလို ကွန်ဖရင့်မျိုးဖန်တီးဖို့ အခြေအနေမပေးသေးလို့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အဓိက ပြဿနာကတော့ ကျနော်တို့မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ရှယ်ယာရင်းလုပ်လိုစိတ် အားနည်းမှုတစ်ခုလိုပဲမြင်မိပါတယ်။
ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေကို နောက်မှ ဆက်ဖြေပါ့မယ်။
The Following 20 Users Say Thank You to tunaungkyaw For This Useful Post:
AndrewSway, civilkoko, Dragon Warrior, kay lay, koko02kk, NayNyo, nyeinmoewai, phoelapyae, pigkalay, skhaung, tinminhtoo, William Paul, zinmaung, ကိုထွန်း, ကိုလင်း, ချင်းတွင်းသား, လိပ်ကြီး, ကျော်စွာ, နေမင်းသွေး, နွေဦး
03-28-2012 10:39 PM #3
အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတာ လိုအပ်ချက်တွေအများအပြား ကို တာဝန်ယူဖြေရှင်း ရင်း အသစ်တွေ ပြင်ဆင်ပေးနေရတဲ့ လူတယောက် ။ ကိုယ့် အလုပ်ပေါ်မှာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့ အချက်ကို ကိုယ်လေ့လာထားသမျှနဲ. နှိုင်းယှဉ်ပြီး အဖြေရှာနေတက်သူ တယောက် ။
MEF မှာက မေဂျာစုံ နယ်ပယ်စုံက အကိုအမ တွေရဲ. ဗဟုသုတ တွေ ဆွေးနွေးခန်းတွေ က အဆွဲဆောင်ဆုံးပေါ့ ။ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာ နယ်ပယ်အများဆုံးမြန်မာ ဖိုရမ်ဖြစ်နေတာလဲ အချက်တချက်အနေနဲ.ပါတယ်။
ကိုယ့် အလုပ်အပေါ်ချစ်မြတ်နိးတဲ့စိတ် ဂုဏ်ယူတဲ့စိတ် တစ်ခုက မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ. အရည်အသွေးတစ်ခုပဲ ။ အဲ့လိုပြောလိုက်လို. မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ မာနကြီးတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်နဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဆိုတာနဲ့ သူများ နိင်ငံက အင်ဂျင်နီယာ တွေနဲ့ စတွေ့တွေ့ချင်း ယှဉ်လိုက်ရင် အထင်သေးခံရတာပဲ ။ အဲ့ဒါကို စိတ်မပျက်ပဲ ကြိုးစား ရပ်တည်နေနိင်တာကိုက မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အရည်အချင်းတခုပါ ။
တိုင်းတာဖို့ အချက်တွေကတော့ အများကြီး ရှိမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဲ့ဒီနိင်ငံက လူငယ်လူရွယ်တွေ ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ ဆိုတာနဲ့ပဲ တိုင်းတာချင်တယ် ။
Industrialization ကို အရှိန်အဟုန် နဲ့ အကောင်ထည်ဖော်ဖို. ကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာတွေက အရေးပါတယ် ။ နိင်ငံတကာက Industry ကြီးတွေဟာ စက်တခုလုံး၊ ပစ္စည်းတခုလုံး ကိုမထုတ်လုပ်ကြပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Small Medium Enterprise တွေ ကို Subcontract ပေးပြီး အစိတ်အပိုင်း တချို့ကို လုပ်ခိုင်း ကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင် တိကျတဲ့ standardard ကအရေးပါမှာပါ ။
အဲ့လို နိင်ငံတကာ ဈေးကွက်ဖြစ်လာရင် အသေးစား အလတ်စား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ အင်ဂျင်နီယာတွေ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်လာရလိမ့်မယ် ။
တည်ဆောက်နေဆဲ ကျွန်တော်တို့ နိင်ငံအတွက် ခေတ်ကိုပြင်မယ့် အင်ဂျင်နီယာ တွေ အများကြီးလိုတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် ။
Last edited by cy; 03-28-2012 at 10:43 PM.
The Following 23 Users Say Thank You to cy For This Useful Post:
civilkoko, Dragon Warrior, Hla Min Maung, htinlin, johnmoeeain, kay lay, NayNyo, nyeinmoewai, pazflor, phoelapyae, pigkalay, skhaung, tinminhtoo, tunaungkyaw, William Paul, zinmaung, ကိုထွန်း, ကိုလင်း, ချင်းတွင်းသား, ကျော်စွာ, နေမင်းသွေး, နွေဦး, အေ၇ာ
03-29-2012 06:03 PM #4
ကို CY ပြောတာ တကယ်မှန်ပါတယ်။ industrialization လုပ်ဖို့၊ standardization ကိုအရင်ဆုံး သတ်မှတ်ရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်။ စက်တခုလုံး၊ ပစ္စည်းတခုလုံး အစအဆုံးမထုတ်လုပ်ပဲ၊ သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းလိုက်သာ ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ၊ 'Industrial Standards' တွေအရထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်သလို၊ စက်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း products တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်မှနည်းစဉ် processes တွေအတွက်၊ TQM ဆိုတဲ့ total quality management စနစ်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ 'စံ' သတ်မှတ်ထားတဲ့ standardizations တွေအပြင်၊ qualification ဆိုတဲ့ ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းရဲ့အရည်အသွေးကိုပါ စီစစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ 'စံ' သတ်မှတ်ထားတဲ့ standardizations တွေလည်းရှိပါတယ်။
လွပ်လပ်ရေးရပြီးစ၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေါတ်ဦးမှာ BIS လို့ခေါါတဲ့ 'Burma Industrial Standards' ကိုပြဌာန်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်လို့၊ ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဏာရအစိုးရအဖွဲ့အစည်း အတွင်း၊ အားပြိုင်မှုတွေကြောင့်၊ 'Burma Industrial Standards' ကိုပြီးဆုံးအောင်မရေးဆွဲနိုင်ခဲ့သလို၊ စက်မှုနိုင်ငံထူထောင်ရေးကိုလည်း၊ လှည့်မကြည့်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး။ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေါါတ်နဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရခေါါတ်မှာလည်း၊ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ပန်းတိုင်ကို၊ ချီတက်နေရတဲ့အတွက် အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ခေါါတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကို၊ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာ၊ အားလုံးအသိပါပဲ။
industrial standardization ဟာ စက်ာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတာတွေ့ရပါတယ်။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နည်းပါးတဲ့ စက်ာပူဟာ၊ ပြည်ပမှ လူ့စွမ်းအားတွေ တင်သွင်းရပါတယ်။ ပထမဦးစားပေးက traditional country ဆိုတဲ့၊ စက်ာပူလူမျိုးတွေရဲ့ မူလတိုင်းပြည်မှ လူ့စွမ်းအားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အိန္နိယ၊ တရုပ်နဲ့ မလေးရှားတို့ဟာ traditional country တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယဦးစားပေးကတော့ non-traditional country ဆိုတဲ့၊ မြန်မာ၊ ဘဂ်လားဒေ့ရှ်၊ ဖိလစ်ပိုင်အစရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှ လူ့စွမ်းအားတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ၊ non-traditional country ဖြစ်ပေမယ့် စာတတ်မြောက်မှုနှုံး literacy rate မြင့်မားတဲ့အတွက်၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားမှုမှာ traditional country တွေပြီးရင်၊ ပထမဦးစားပေး တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။
စက်ာပူစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားမှုကိုကြည့်ရင် မြန်မာတွေကို servicing, maintenance, repairing နဲ့ installation အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာပဲ၊ ခန့်ထားတာတွေ့ရ ပါတယ်။ production ပိုင်းမှာ မရှိ သလောက်နည်းပါတယ်။ production ပိုင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ industrial standard ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း industrial production နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ချက်တွေအရ၊ အသေးစား၊ အလတ်စားနဲ့ အကြီးစား စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ မယ်မယ်ရရ မရှိသလို၊ industrial standardization လည်းမရှိတဲ့အတွက်၊ production ပိုင်းမှာ မြန်မာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို၊ ထည့်သွင်းအသုံးမပြုနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာ၊ ရတနာပုံနန်းတည်မင်းတုန်းမင်းတြားကြီးခေါါတ်ကတည်းက၊ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်တွေစေလွှတ်ရာမှ၊ စခဲ့သလို၊ (၁၈၅၄) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၊ ဂျပန်ပြည်မှ Meiji period လို့ခေါါတဲ့ မီဂျီဘုရင်ခေါါတ်မှာ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်တွေစေလွှတ်ခဲ့တာနဲ့၊ ခေါါတ်ကာလခြင်းမကွာတာတွေ့ရပါတယ်။ JIS လို့ခေါါတဲ့ Japanese Industrial Standards ကိုတော့၊ (၁၉၂၁) ခုနှစ်မှာ၊ စတင်ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
နယ်ပယ်စုံမှ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေအပါအဝင်၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရှင်တွေ၊ ဘာသာဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေကို၊ စုစည်းကာ အမြဲတမ်းကော်မတီတရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပြီး၊ ရေးဆွဲ နိုင်မယ်ဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်း မြန်မာ Industrial Standards မူကြမ်းတခု ဖြစ်ပေါါလာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ Industrial Standards ဟာ နည်းဥပဒေ regulations သာဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှ၊ အတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်သလို၊ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Industrial Standards ကော်မတီမှ ပြင်ဆင်ချက်တွေ၊ ဖြည့်စွက်ချက်တွေကိုလည်း၊ အမြဲမပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေနဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေရှိတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ၊ Industrial Standards ကိုပြဌာန်းနိုင်မှ၊ စက်မှုနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
Last edited by ကိုထွန်း; 04-03-2012 at 08:07 AM.
The Following 26 Users Say Thank You to ကိုထွန်း For This Useful Post:
AndrewSway, astar, civilkoko, cy, Dragon Warrior, dudugyi, johnmoeeain, kay lay, moenyatzo, NayNyo, neonmgmg, nyeinmoewai, phoelapyae, pigkalay, skhaung, tinminhtoo, tunaungkyaw, William Paul, wlk3649, zinmaung, ကိုလင်း, ချင်းတွင်းသား, ကျော်စွာ, နေမင်းသွေး, နွေဦး, အေ၇ာ
03-31-2012 10:04 AM #5
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့အသုံးအနှံးကို၊ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန်က၊ ' ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝန်းမှာ ပြည်သူလူထုဟာ၊ လွပ်လပ်ပြီး၊ ကျမ်းမာပျော်ရွှင် စွာနေထိုင်နိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံ' ဆိုပြီး၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘောဂဗေဒနဲ့ စာရင်းအင်းပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့၊ gross domestic product ဆိုတဲ့ GDP နဲ့ life expectancy ဆိုတဲ့ လူ့သက်တမ်း၊ literacy rate ဆိုတဲ့ စာတတ်မြောက်မှုနှုံး၊ မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးမှုနှုံးအစရှိတဲ့ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ၊ statistical indexes အညွှန်းကိန်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားဘောဂဗေဒပညာရှင် မာဘတ်အူလ်ဟတ် တီထွင်သုံးစွဲခဲ့တဲ့၊ human development index HDI ကိုပြောင်းလဲ၊ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
HDI မှာ လူ့သက်တမ်း life expectancy ၊ စာတတ်မြောက်မှုနှုံး literacy အပြင်၊ education ဆိုတဲ့ ပညာရည်အဆင့်အတန်းတွေ၊ decent standard of living GNI ဆိုတဲ့၊ လူတဦးခြင်းစီ တနှစ်ဝင်ငွေနဲ့၊ standards of living ဆိုတဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ child welfare ဆိုတဲ့ ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကို၊ standards of living ရဲ့ အခြေခံအချက်တခု အဖြစ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါတယ်။ standard of living ဟာ GDP နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တိုင်းပြည်မှာ ချမှတ်လိုက်တဲ့ impact of economic policies on quality of life ဆိုတဲ့၊ 'စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေကြောင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝ၊ ထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိ' ကို၊ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါတယ်။ GDP တက်လာတိုင်း၊ HDI လိုက်ပါ မြင့်လာခြင်း မရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
IMF ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့အစည်းကတော့၊ per capita income level ဆိုတဲ့ လူတဦးခြင်းရဲ့ တနှစ်စာဝင်ငွေ၊ export diversification ဆိုတဲ့ ပို့ကုန်အမျိုးအစား စုံလင်စွာတင်ပို့နိုင်မှုနဲ့ degree of integration into the global financial system ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာ၊ ပါဝင်နိုင်မှု၊ စတဲ့ flexible classification system ကိုသုံးပြီး၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတိုင်းတာလေ့ရှိပါတယ်။ IMF ဟာ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်၊ 'liquidity ဆိုတဲ့ ငွေဖြစ်လွယ်မှု' ကို၊ အခြေခံပြီးတွက်ချက်တာ၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ လူမှုရေးသရုပ်ခွဲစိတ်ပညာရှင် အေဒရီယံဂျီ ဝှိုက်ကတော့၊ 'life satisfaction' ဆိုတဲ့ satisfaction with life index နဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကိုလေ့လာ ဆန်းစစ်နိုင်တယ်လို့၊ ပြောပါတယ်။ အခုတလော satisfaction with life index နဲ့ပက်သက်ပြီး၊ ကျွန်းကလေးမှာလည်းကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားရသလို၊ မနက်တိုင်း ဝယ်ဖတ်တဲ့ ပြား (၇၀) တန် The News Paper ဆိုတဲ့၊ သတင်းစာမှာလည်း၊ မကြာခဏ စစ်တမ်းကောက်ယူဖော်ပြတာ၊ ဖတ်မိပါတယ်။ ဟိမဝန္တာတောင်ကြားမှ ကုန်းတွင်းပိတ် နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံဟာ၊ satisfaction with life index အရအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ရုပ်ဝထ္တုတွေကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း မရှိပေမယ့်၊ HDI နဲ့ပြန်တွက်တဲ့အခါ၊ ကျွန်းကလေးထက်သာ ပါတယ်။
အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ထွက်စည်းမျှဉ်းခံဘုရင်၊ အာဏာရပါတီရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပိုင်နဲ့ အတိုက်အခံပါတီဟာ၊ ပါလီမန်မှတဆင့် တရားမျှတစွာနဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကို၊ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားကြပါသတဲ့။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝန်းမှာ ပြည်သူလူထုဟာ၊ လွပ်လပ်စွာပြီး၊ ကျမ်းမာပျော်ရွှင် စွာနေထိုင်နိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံလို့၊ သတ်မှတ်နိုင် ပါတယ်။ ဘူတန်ဟာ HDI မှာ ကျွန်းကလေးထက်သာတယ်ဆိုပြီး၊ ကျွန်းကလေးသူ၊ ကျွန်းကလေးသားတွေက သူတို့ရဲ့ satisfaction with life index ကိုမြှင့်ပေးဖို့၊ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ ပြား (၇၀) တန်သတင်းစာရဲ့၊ သတင်းစာဆရာတဦးမှ ဘူတန်မှာပြောင်းနေကြပါလား ဆိုပြီး၊ ဆောင်းပါး တပုဒ်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှ ကျွန်းကလေးသူ၊ ကျွန်းကလေးသားတွေလည်း MRT မစီးရမှာကြောက်ပြီး၊ ငြိမ်သွားပါတော့တယ်။
မူလကတည်းက သယံဇာတပေါကြွယ်ဝကာ၊ human capital ဆိုတဲ့ လူအများရဲ့အရည်အသွေးကလည်းကောင်းသလို၊ စာတတ်မြောက်မှုနှုံး literacy rate လည်းကောင်းမွန်ပြီး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝန်းမှာ ပြည်သူလူထုဟာ၊ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ရကြမယ်၊ တိုးတက်မှုတွေ၊ အားသာချက်တွေကို၊ sustainability အနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရန် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်၊ မြန်မာပြည်ဟာလည်း၊ ကဏ္ဍစုံမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
Last edited by ကိုထွန်း; 04-02-2012 at 03:56 PM.
The Following 23 Users Say Thank You to ကိုထွန်း For This Useful Post:
AndrewSway, astar, cy, Dragon Warrior, dudugyi, Hla Min Maung, htinlin, johnmoeeain, NayNyo, nyeinmoewai, pazflor, phoelapyae, pigkalay, tinminhtoo, tunaungkyaw, William Paul, zinmaung, ကိုဖိုးဇော်, ကိုလင်း, ချင်းတွင်းသား, နေမင်းသွေး, နွေဦး, အေ၇ာ
04-09-2012 07:01 PM #6
- ကိုယ်ကို၌က အင်ဂျင်နီယာ လို့ ဆိုထားတဲ့ လက်မှတ်ကလေးကလဲ ရထားတော့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျနော် သိတာလေးတွေကိုလဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်မသိတာလေးတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ကျောင်းတက်တုန်းကလည်း ကျောင်းစာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောတရားလေးတွေ ဘာလေးညာလေးတွေကို ဆွေးနွေးငြင်းခုံ ရတာ အင်မတန် ပျော်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျောင်းဆင်းပြီးသကာလ အဲ့လိုပြောဆိုလို့ ရမယ့် ဘော်ဒါတွေနဲ့ဝေးကွာသွားပါတယ်။ MEF ရောက်တော့ အဲ့လို ဆွေးနွေးလို့ ရမယ့် ဘော်ဒါအသစ်တွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရင်း မသိတာလေးတွေမေး၊ သိတာလေးတွေပြောရင်း ဆိုရင်း၊ ရင်းနှီးလာခဲ့ရင်း ပျော်မွေ့လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မှာ မွေ့လျော် လာပါတယ်။ ဖိုရမ်ရဲ့ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကိုလဲ နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်ပေးရင်းနဲ့ သံယောဇဉ် တွယ်လာတာပေါ့ဗျာ။ တခြားဖိုရမ်တွေနဲ့ စာရင် သိပ်ပြီးတော့ Active မဖြစ်တော့သလို ခံစားမိပေမယ့် ဆက်ပြီးတော့ ပျော်မွေ့ဆဲပါပဲ။
The Following9Users Say Thank You to htinlin For This Useful Post:
Dragon Warrior, dudugyi, nyeinmoewai, pigkalay, tinminhtoo, William Paul, zinmaung, ကိုထွန်း, ကိုလင်း
04-09-2012 07:44 PM #7
- ကိုထွန်း ပြောတဲ့ အချက်ကလေးတွေမှာ တော်တော်စုံစုံလင်လင် ပါသွားပါတယ်။ တိုးတက်တယ်ဆိုတာဟာ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေ ရှိနေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုက်သင့်တဲ့ Infrastructure တွေ ရှိရမယ်။ စိုးရိမ် ကြောင့်ကြမှုနည်းပါးရမယ်။ ၀င်ငွေနဲ့လောက်င ပိုလျှံ သုံးစွဲနိုင်ရမယ်။ ရောဂါဘယနည်းပါးစေရမယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကုသမှု စရိတ်နည်းပါးရမယ်။ အများကြီးပါပဲ ... အနှစ်ချုပ်ရရင် တော့ ကောင်းတာတွေ အများစု ရှိနေမယ် ၊ဖြစ်ထွန်းနေမယ် ဆိုရင် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိတယ်လို့ ကျနော်ယူဆမိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အေးချမ်းခြင်း၊ အသိဥာဏ်မြင့်မားခြင်း စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်ခြင်းတွေလဲ ရှိမှသာ တကယ်တမ်း တိုးတက်ဖွ့ံဖြိုး တယ်လို့ တော့ ကျနော် ထင်မိတယ်။ သို့ သော်လည်းပဲ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ ကတော့ခဲယဥ်းပါတယ်။ Ideal State ပါပဲ။ Actual life တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။
Dragon Warrior, dudugyi, nyeinmoewai, pigkalay, tinminhtoo, William Paul, zinmaung, ကိုထွန်း, ကိုယ်တော်ချော
04-10-2012 07:04 PM #8
- တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ရာ ၀င်ငွေကောင်းမှဖြစ်မယ်။ ၀င်ငွေကောင်းဖို့ ရာ ထုတ်ကုန်တွေ ရှိမှဖြစ်မယ်။ ထုတ်ကုန်ဆိုတဲ့အရာတွေမှာ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်လား၊ ရေထွက်ပစ္စည်းလား၊ သဘာဝသယံဇာတလား၊ ပညာရေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန် လား၊ စက်မှု ထုတ်ကုန်လား စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ စက်မှုထုတ်ကုန်က ရရှိတဲ့ ၀င်ငွေနဲ့အဲ့ဒီ ၀င်ငွေအပေါ် နိုင်ငံတော်က ရရှိတဲ့ အခွန်အခတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း မသေးပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့် -စပါးရောင်းပြီး ငွေ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် ရဖို့က ပင်ပန်းတဲ့ အဆင့်တွေ အမြောက်အများကို ဖြတ်သန်းရပါတယ်။ ထွန်ယက်ရတယ်၊စိုက်ပျိုးရတယ်၊ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ စောင့်ရတယ်၊ မြေသြဇာတွေပေးရတယ်၊ ပိုးဘာညာမကျ အောင်လည်း ဂရုစိုက်ရတယ်၊ နောက်ဆုံး ရိတ်သိမ်း ချွေလှေ့ ရတယ်။ အဆင့်တွေကများပြီး ၁၀၀၀၀၀ ရဖို့အချိန်တော်တော်ကြာအောင် ရင်းနှီးရတယ်။ နည်းပညာအရင်းခံတဲ့ စက်မှုထုတ်ကုန်တွေမှာတော့ Circuit တွေကို ဟောတစ်ခု ဟောတစ်ခုနဲ့ရိုက်ထုတ်ပြီး mp4 player လေးတွေ၊ Game စက်လေးတွေ၊ mobile ဖုန်းလေးတွေကို သိပ်မကြာတဲ့အချိန်အတောအတွင်းလေးမှာပဲ ဟောတစ်ခု၊ဟောတစ်ခု ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် နာရီပိုင်း မိနစ်ပိုင်းကလေးနဲ့ တင် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေဟာ အချိန်နည်းနည်းလေးမှာ ရရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုမျိုး ထုတ်လုပ်ဖို့ လွယ်ကူလားဆိုတော့ မလွယ်လှပါဘူး။ အဲ့လိုထုတ်နိုင်ဖို့ ရာ နည်းပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေ ၊ အချိန်တွေအများကြီး ပေးဆပ်ရင်းနှီးထားခဲ့တဲ့ ဦးနှောက်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ Production Technology တိုးတက်ထွန်းကားလာမှသာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ ဖွံ့ ဖြိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ရာ အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ အရေးကြီးပါတယ်လို့ ကျနော် ထင်မြင်မိပါတယ်။
The Following 13 Users Say Thank You to htinlin For This Useful Post:
astar, Dragon Warrior, dudugyi, nyeinmoewai, pazflor, pigkalay, tinminhtoo, William Paul, zinmaung, ကိုထွန်း, ကိုယ်တော်ချော, ကိုလင်း, အေ၇ာ
04-12-2012 01:28 PM #9
Regulation ကို ပြဌာန်းမယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာ နဂိုထဲက လုံးဝ မရှိတာကို စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ရမယ်လို့တော့ မယူဆမိပါဘူး။( BASIC တော့ ရှိခဲ့မှာ ပါ။ )
ကျွန်တော်က ကိုယ့်အပိုင်းလေးကိုပဲတည်ပီး ဆွေးနွေးကြည့်မယ်နော်.........။
တရုတ်ကနေ လေယာဉ် Assembly Line ၀ယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုပါတော့....... CHINA STANDARD ကို လိုက်ရမယ်ပေါ့။
ဥရောပကနေ၀ယ်ရင် EUROPEAN STANDARD ......
နောက် အမေရိကားကနေ၀ယ်ပြန်ရင်လဲ တမျိုးလာမယ်ဆိုတော့ .......
ဘယ်နိူင်ငံကနေလာလာ CONVERSION FACTOR ကနေ Myanmar Std ထဲကို အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့် အပိုင်းလေးပါလာတယ်ပေါ့နော်......။
တချို့နေရာတွေမှာ သူပေးနေတာကို ကိုယ်ကလဲ ယူချင်တယ်။ ရှိနေတဲ့ RULES & REGULATIONS နဲ့မကိုက်လို့ မရလိုက်ဘူးဆိုရင်......
နောက် ကိုယ်တခါမှ မသုံးဘူးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေဆိုရင် ရှိနေတဲ့ REGULATIONS တွေကလဲ စာရွက်သက်သက်လောက်ပဲ အဖိုးတန်တော့မယ်။ ( နောက်ပိုင်းမှာက ကိုယ်မသုံးဘူးတာတွေပဲ ၀င်လာတော့မယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ။ )
အရင်က ရှိနေတာတွေကလဲ လက်ရှိတကယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ PAPER WORK တွေနဲ့ တအားကို ကွာဟ နေပါလိမ့်မယ်။
စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေက AUTOMATION ပိုင်း တအားပါလာရင် REGULATION ပိုင်းမှာရော ဘယ်လို စဉ်းစားကြမလဲ?
ပြည်ပကနေ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ခေါ်တယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်နိူင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ ကွာဟမှုလေး နည်းနည်းပိုများသွားမလားလို့?
ကျွန်တော် မြင်တဲ့ အပိုင်းလေးကနေ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ။
The Following 11 Users Say Thank You to zinmaung For This Useful Post:
AndrewSway, cy, Dragon Warrior, dudugyi, htinlin, nyeinmoewai, pigkalay, tinminhtoo, William Paul, ကိုထွန်း, ကိုယ်တော်ချော
04-12-2012 03:59 PM #10
Originally Posted by zinmaung
နောက် ကိုယ်တခါမှ မသုံးဘူးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေဆိုရင် ရှိနေတဲ့ REGULATIONS တွေကလဲ စာရွက်သက်သက်လောက်ပဲ အဖိုးတန်တော့မယ်။ ( နောက်ပိုင်းမှာက ကိုယ်မသုံးဘူးတာတွေပဲ ၀င်လာတော့မယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ။)
ကိုဇင်မောင်ထွန်းရေ... standardization ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ intentional standards နဲ့ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည် အလိုက် national standards ဆိုပြီး၊ (၂) မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ standardizations လုပ်ပြီးရင် classifications ဆိုတာရှိပါတယ်။ classifications ဟာ regulations ကို အခြေခံရပါတယ်။ classifications ပြီးမှ၊ registration အဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်အလိုက် standardizations တွေ ပြဌာန်းထားပေမယ့်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ လိုက်နာလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့၊ classifications တွေနဲ့ အညီ ထုတ်လုပ်ရပါတယ်။ မြို့ပြလေကြောင်းကဏ္ဍနဲ့ ပက်သက်လို့ ICAO - International Civil Aviation Organization မှ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ classifications တွေနဲ့အညီ၊ ထုတ်လုပ်ထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အလားတူ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းကဏ္ဍမှာလည်း၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်အလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ standardizations တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အသုံးပြုထားတဲ့ standardizations တွေ ဟာ၊ IMO - International Maritime Organization အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ classifications တွေနဲ့ အညီ ထုတ်လုပ်ထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရဲ့ automation & control system တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ လိုက်နာလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့၊ protocols တွေရှိပါတယ်။ ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ standardizations တွေ အသက်ဝင်ဖို့၊ တိုင်းပြည်တိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာ၊ နည်းဥပဒေ regulations တွေသတ်မှတ်ပေးရပါတယ်။ ဥပမာ ရေးဆွဲနေဆဲ BC Code ဆိုတဲ့၊ Building Construction Code ဟာ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဆောက်အဦ၊ လမ်းတံတား၊ ဆည်မြောင်း တာတမံတွေရဲ့ standardizations ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ standardizations ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ လက်ခံထားတဲ့ Building Construction ဆိုင်ရာ standardizations တွေနဲ့အညီ၊ ရေးဆွဲထားကြပါတယ်။ BC Code ဆိုတဲ့ standardizations ကို၊ လိုက်နာပြီး အဆောက်အဦတွေ တည်ဆောက်ဖို့ နည်းဥပဒေ regulations တွေကို၊ ပြဌာန်းရပါတယ်။ စက်ာပူမှာဆိုလဲ CP - Code of Practices လို့ခေါါတဲ့ Singapore Standards တွေရှိပါတယ်။ CP - Code တွေကို၊ ICS - International Classification for Standards မှပြဌာန်းထားတဲ့ classifications တွေနဲ့ အညီရေးဆွဲထားပြီး၊ regulations တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဥရောပကနေ၀ယ်ရင် EUROPEAN STANDARD ......နောက် အမေရိကားကနေ၀ယ်ပြန်ရင်လဲ တမျိုးလာမယ်ဆိုတော့ .......
နောက်တခု procurement အပိုင်းပါ။ အသုံးပြုမယ့်စက်ပစ္စည်း၊ အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ specifications တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ standardizations, classifications နဲ့ regulations တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ သိနားလည်ဖို့လိုအပ်သလို၊ မျက်ခြေမပြတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ကြုံဖူးတာလေးကို ဥပမာပေးပါရစေ။ (၂၀၁၀) နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ၊ portable gas detectors တွေဝယ်ဖို့လိုတဲ့အခါ၊ procurement အပိုင်းကို၊ တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ကုမ္မဏီတခုကထုတ်တဲ့ သုံးနေကျ portable gas detectors တွေရပြီး၊ သဘေ်ာမှာ သုံးနေခဲ့ပါတယ်။ သဘေ်ာဟာ ဥရောပတဝိုက်မှာ တနှစ်လောက်နေဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ၊ သုံးနေကျ portable gas detectors တွေဟာ၊ ဥရောပ standardizations အရ၊ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတာ၊ သိရပါတယ်။ (၂၀၁၁) နှစ်ဦး Asia Pacific Maritime exhibition အာရှ-ပိစိဖိတ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပြပွဲအတွင်း၊ portable gas detectors တွေထုတ်တဲ့ ဂျပန်ကုမ္မဏီရဲ့ ပြခန်းမှာ၊ တရားဝင်မေးတဲ့ အခါမှ၊ registration လျှောက်ထားဆဲ ဆိုတာ၊ သိရပါတော့တယ်။
Last edited by ကိုထွန်း; 04-24-2012 at 09:06 AM.
The Following 13 Users Say Thank You to ကိုထွန်း For This Useful Post:
AndrewSway, astar, cy, Dragon Warrior, dudugyi, htinlin, nyeinmoewai, pigkalay, tinminhtoo, William Paul, zinmaung, ကိုယ်တော်ချော, ကိုလင်း